အကြိုက်ဆုံး antivirus ကို vote ပေးကြရအောင်- စာမျက်နှာ2- MYSTERY ZILLION
kasper 11 ပေါ်ပြီနောက်ပိုင်း<br><br>Microsoft Security Essentials ပဲသုံးတယ် သုံးလို့ကောင်းတယ်<br>အလကားလဲရတယ်လေဟီးဟီးVirus တွေနိုင်တယ်<br> <br>အရင်တုန်းကkasper ပဲသုံးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်း key တွေ crack ဖိုင်တွေရှုပ်လွန်းလို့ <br>Key Block ခဏခဏဖြစ်လို့မသုံးဖြစ်တော့ဘူးစိတ်လေလို့ဝယ်သုံးဆိုရင်<br>၁သောင်းကျော်တောင်လေဟီးမသုံးဖြစ်ပါဘူး<br>panda usb vaccine ရယ် USB Disk Security 6.0.0.126 သုံးတယ် ပေါင်းပြီပေါ့<br><br>လူလေး-ခွန်တွင်းစ် kontwins<br>https://facebook.com/kontwins<br>;
<p class="MsoNormal"><span style="font-family:"Myanmar3","serif"">Avira ပေါ့သိပ်အကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့
နေရာတိုင်က update ရဖို့လွယ်တယ်လေ။<o:p></o:p></span></p>
Microsoft Security Essential ကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူက တခြား Anti-virus တွေလို .exe မြင်တိုင်း
ဖျက်ချတာမျိုး မလုပ်ဘူးလေ။ Avira လိုမျိုး Anti-virus က မြင်မြင်သမျှ keygen နဲ့ Game file တွေကို
ဗိုင်းရပ်စ်ပါဆိုပြီး ပိတ်ထားတတ်တယ်လေ။ MSE တင်ထားတဲ့စက်မှာ ဆော့လို့ရတဲ့ ဂိမ်းတချို့ နဲ့ keygen
တချို့ကို avira က ပိတ်ထားတတ်တယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ဖျက်ပစ်တာ။ အသုံးပြုသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လည်း
မတောင်းဘူး allow လုပ်ပေးပါဆိုလည်း မလုပ်ပေးဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Security Essential ပဲ ကြိုက်တယ်။
ကျွန်တော်က အခု EVDO နဲ့ အင်တာနက်သုံးနေတာပါ။
ကွန်နက်ရှင်ကလည်း သိကြတဲ့တိုင်း 64 kbps ဆိုတော့ အတော်လေးနှေးပါတယ်။
ကျွန်တော် Antivirus တွေကို အရင်က offline update တွေ ဆိုင်က၀ယ်ပြီး update လုပ်ပါတယ်။ ခု အင်တာနက်ကနေ update လုပ်ဖို့စဉ်းစားတော့ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေက ကျွန်တော်ရှိတဲ့ ကွန်နက်ရှင်နဲ့ယှဉ်ရင် အတော်လေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာလေးက ဘယ် Anivirus အမျိုးအစားက Online Update လုပ်ရင် အမြန်ဆုံးလဲဆိုတာရယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ယူနိုင်မလဲဆိုတာရယ်ကိုပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီကြပါဦး။
antivirus ဆိုရင်တော့ avira ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ update လုပ်ရတာလဲလွယ်တယ်။
အဲဒါပေမယ့် update မလုပ်ရင် ရှိသမျှ exe ဖိုင်တွေအကုန်လိုက်ဖတ်နေလို့ တစ်ပတ်တစ်ခါ update တင်ပေးနေရတယ်ဗျာ ပြီးတော့ avg လေးလည်း စမ်းသုံးကြည့်ချင်သေးတယ်ဗျာ...... :-D
Avira Antiver Personal Free Antivirus ကိုကြိုက်တယ်
အလကာ:လဲ ရတယ် ဗိုင်းရပ် တော်တော်များများလဲ ဖမ်းပေးတယ်
ပြီးတော့ အစကထဲက ဒီ၁ခုပဲ သုံးဘူးတာမို.ပါ
အနော်ကတော့ Avira 10ပဲသုံးတယ်....Windown7နဲ.ဒါပေမဲ့ winhelp.exe virus ၀င်တာသတ်လို.ကိုမရဘူး :-((
Notorn 360 ကိုသုံးနေပါတယ် ။ Norton ကိုသွင်းထားရင် စက်တော့လေးစေပေမဲ့ စိတ်ချရတယ် ။ တကယ်လို့ကွန်ပြူတာက Idle ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လဲ သူက အော်တို စစ်ပေးပါတယ် ။ နောက်ပြီး Virus တော်တော်များများကိုလဲတွေ့တယ် ထင်လို့ Norton 360 ကိုကြိုက်ပါတယ် ။
- can do offline update easily.
- I use Avira and USB Disk Security.
- I've used Avira since2years ago, I've never got virus problems.
အားလုံးက ဝင်ရေးနေတော့ ကျွန်တော်လဲ ရေးချင်စိတ်ပေါက် လာတာနဲ့ဝင်ရေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခု ထဲကို အစွဲ ထားပြီမသုံးဘူး။ တစ်ယောက် က ဒါလေးကောင်းတယ် သုံးလိုက်ဆို သုံးကြည့်လိုက်တာပဲ။ အရင်ကတော့ bitdefender ကိုသုံးတယ်။ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး သူက နံပါတ် တစ်ဆိုတော့။ နောက်သူကလဲ update တွေကို တစ်ရက်တစ်ခါ လောက်ချပေးနိုင်တယ်။တော်တော် လဲ virus တွေကိုသတ် နိုင်တယ်ဆိုလို့ ဝယ်သုံးလိုက်တယ်။ အခု တော့ free ၇တဲ့ microsoft security essentials ကိုသုံးဖြစ်တယ်။ တော်တော်လေး ကောင်းတယ်။ ပေါ့လဲ ပေါ့တယ်။ virus လဲတော်တော် များများ သတ်နိုင်တယ် ။ microsoft ကထုတ်တော့ window နဲ့ လိုက်မယ် ထင်လို့သုံးဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ kaspersky2011 ကိုကြိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ gadget လေးကလည်းလှပါတယ်။
တစ်ခြား antivirus ထက်စာရင် user friendly ပိုဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကအခြား antivirus တွေက
ကျွန်တော်သိမ်းထားတဲ့ crack file and keygen uitility တွေကိုပြသနာရှာနှုံးနဲးပါတယ်။kasperက
တကယ် virus ဟုတ်မှသတ်တာပါ။ဘာဘဲပြောပြောကျွန်တော်အထင်တော့ kasper ကပိုက်ဆံပေးဝယ်
ရတောအခြား free ရတဲ့ antivirus နဲ့တောကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ kaspersky ကသိပ်လည်းစျေးမကြီး
ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတောkaspersky 2007 and kespersky 2011 ကို vote ပေးပါတယ်။
Antivirus ကိုဘဲ အားကိုးလို့ မရပါဘူး Administrator User Level မသုံးဘဲ Limited User Level နဲ့ သုံးဖို့လိုပါတယ်။ Limited User Level နဲ့ သုံးနေမယ်ဆိုရင် ၅၀% လောက် စိတ်ချရဘီ...
Limited User level နဲ့ သုံးရင် တချို့ software တွေက windows ထဲမှာ အလုပ်လုပ် နိုင်ပါ့မလား။ Administrator control ၇မှ အလုပ်လုပ် တဲ့ software တွေရှိလို့။
Erase ပြောတာမှန်ပါတယ်. ကောင်းတာက အမြဲသုံးနေကြ User ကို Limited User Level မှာထားသုံးပြီး Administrator right နဲ့မှ သုံးရတဲ့ application ကိုသုံးမယ်ဆိုမှ Administrator User Level ရှိတဲ့ User နဲ့ ​ပြောင်းသုံးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်..
Windows7မှာဆို User Account Control က လိုအပ်ရင် Administrator Level ရှိတဲ့ User name နဲ့ password လာမေးမှာမို့ အဆင်​​​​ပြေ နိုင်ပါတယ်..
Windows XP မှာဆို Run As ဆိုတဲ့ Feature သုံးလိုက်ရင် အဆင်​ပြေနိုင်ပါတယ်...
မိမိ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ User Level က Limited ဆို virus ထိသွားတဲ့အခါ အပျက်အစီး နည်းပါမယ် Administrator Level နဲ့ဆိုရင်တော့ အပျက်အစီးကများနိုင်ပါတယ်...
အဲ.. ကျွန်တော်ကတော့ Avira 10 Free Version လေးကိုသုံးပါတယ်.. ပေါ့တယ်.. update လုပ်ရအဆင်​ပြတယ်.. virus အသစ်ပေါ်လာတာနဲ့ သိတာများတယ်.. License version ဆိုရင်တော့ ပို​ကောင်းမယ်ထင်တယ်...
Avira 10 ကို အမှတ်ပေးလိုက်တယ်... :-D
because is very simple and very easy to use
Avast ကို ကြိုက်တယ် ။။
မီးတို့ တစ်ရွာလုံး Avast ပဲသုံးပါတယ် ရှင် ( ကြော်ငြာ )
သူက -င် ပေါ့တယ် ... Virus Database update အပြင် Program ကိုပါ Update လုပ်နိုင်တယ် ။
Update လုပ်တဲ့ အခါလည်း အရမ်းမြန်တယ် ။
Avira လို Game က Crack File တွေကိုလည်း တစ်ချိန်လုံး နှောက်ယှက်နေဘူး ။
AVG လိုလည်း Virus Value ထဲကို ဆွဲဆွဲမထည့်ဘူး ။
Virus အရှာလည်းကောင်းပါတယ် ။ Website တွေကိုလည်း Rate လုပ်ပေးတယ် ။
ကောင်းကောင်းမကောငး်ကောင်း အနော်ကတော့ ဒါပဲ ကြိုက်တယ် ။ :X
( မှားတာလေးတွေရှိရင်လည်း ဖြည့်တွေးပေးပါ )
Avast က update လုပ်ရင် ဖိုင်ဆိုက်ဇ် အသေးဆုံးလို့ နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှာ ရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်... ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ မရှိဘူး... ဖိုင်ဆိုက်ဇ်နဲ့ security ဘယ်လို အချိုးကျမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး... ဆိုက်ဇ်သေးလို့ security မလုံတာမျိုးဖြစ်မလားမသိ... ကျွန်တော်ကတော့အိမ်သုံးဆိုတော့ virus ဝင်နိုင်ခြေက ဆိုင်သုံးထက်တော့ နည်းပါတယ်... ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ Avast fan တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျ... အခု ကျွန်တော်သုံးနေတာကတော့ MSE ပါ... ဒီပို့စ်မှာညွှန်းတာတွေ့လို့သုံးကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ... update လည်း မကြာဘူး... offline update ဆိုလည်း 60MB ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ သိပ်မကြီးဘူးပြောလို့ရတယ်... တင်ပြီးတော့ စက်လည်း တော်တော်ပေါ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့် Avast လည်း သုံးကြည့်ဦးမယ်ဗျာ...
Microsoft Security Essential is good enough for most of the users!
AVG, Avast, Avira are very good free antivirus. I think the only difference with the paid version is that free ones don't update everyday. But it works like the paid ones in the system protection. AVG is very light by the way.
I have used KAV 2011 license version. It's not bad but can make the system slow. Also slow down system start up more noticeably. It doesn't have pulse update.
Then I used KIS 2012, better than 2011, particularly effects on computer performances.
I am now trying Norton Internet security 2012, I think it's better than Kaspersky in that it has less effect on memory and system start up. Norton is completely different from its old product. It also has start up manager which you can delay other start up programs. It has pulse update which means it updates every 5-15min in the background, so if you have bad connection, it's the best for you.
I vote NIS or NAV. But we don't have reseller in Myanmar. May be because of the sanction.
i like panda cloud anti-virus.You can see good aspect of panda when you use.
I like Symantec Cooperation Edition 10.2 ..for windows Vista and7.
I wish that Everybody use it . No Virus can affect system.
- include (antivirus, antispyware, antirootkit)
- can use free version all the time
- can update manual easily (Tools >> update from directory)
- most virus can detected
- Resident sheild (Real Time Protection)
- AVG Gadget (For Win 7)
AVG Virus Value is good for restore file like an (Keygen / Patch - not real virus) files...
You maybe don't know about it
I vote Microsoft Security Essentials because it's easy to use for end users.
ကျွန်တော်ကတော့ Kaspersky internet-security ကိုပဲသုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်စသုံးကတည်းက ဒါကိုပဲသုံးပါတယ်။ကွန်ပျူတာစပီးဆင်တုန်းက တစ်ကြိမ်တော့ Essentials ကိုသုံးဖူးပါတယ် ဒါပေမဲ့Kaspersky internet-securityလောက်မကြိုက်ပါ.Kaspersky internet-security က လင့်တစ်ခုခုကို ၀င်လိုက်ပီဆိုနဲ့ သူက သံသယရှိတယ်ဆို အဲဒီလင့်ကို စစ်ဆေးခိုင်းပါတယ်။အဆင်ပြေမှပေးဝင်ပါတယ်။တစ်ခြား Security မှာ အဲလိုမျိုးပါချင်ပါမှာပါ။ကျွန်တော်တော့ Kaspersky internet-security ကိုသုံနေကျဖြစ်သွားလို့ထင်တယ် အဲဒါပဲစိတ်ထဲမှာ သုံးချင်နေတယ် ။ပိုလုံချုံတယ်လို့လဲ ယူဆမိပါတယ်နောက်ပီးလိုင်စင်ဗားရှင်းကို ၀ယ်သုံးထားတဲ့အတွက် တစ်ခြားဟာပြောင်းသုံးရမှာဝယ်ပီသားဖြစ်တာနဲ့မပြောင်းဖြစတော့တာပါ။
တို့ကတော့တို့ကတော့ Microsoft security essential အကြိုက်ဆုံးပါ
i like (avg) so quick
i use avira v 12.1 and usb disk security v 6.1
ဖရီး လည်းရတယ်....အတန်အသင့်လည်း ကောင်းတာကြောင့်ပါ
ကျနော့ ဆိုင်က စက်မှာ တစ်လုံးကို avira နောက်တစ်လုံးကို kasper 2011 license version
stick တစ်ခုကို မသကာ လို့ kasper နဲ့စစ်ကြည့် တော့ မတွေ့ဘူးဗျာ..
ဒါနဲ့ဘယ်ရမလဲ မကျေနပ်လို့ avira နဲ့စစ်လိုက် တော့ မောင်မင်းကြီးသား magway FC ကိုတန်းတွေ့တော့တာပါပဲ..
Kasper အကိုတွေကတော့ အနော့ကို တောက်မြင်ကပ်နေမယ်နဲ့တူတယ်.. ပုပ်ခတ်တာ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ဒါကြောင့်မို့ အလကားရတဲ့ avira ကို vote ပေးပါတယ်..
at the first say i like AVG ....
now i like Kaspersky 2012 tooo ... coz it can heal inflect file (by not delete file method) it's great
security essential က အလကားရတယ်ဂျ..ကန်းလည်း ကန်းတယ်..ဟိ..အံမာ..loder ကို hack tool ဆိုပဲ....
(၂) Free ဗားရှင်းလည်းရတော့ copy right ကိုမချိုးဖောက်ဘူးပေါ့။
(၃) virus definition လည်း size သေးတော့မြန်မာ connection နဲ့ကအိုကေပဲ။
(၄) သုံးရတာလွယ်တယ်၊ စက်လည်းမလေးဘူး၊ ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလဲမြန်တယ်။
(၅) ဒါပေမယ့် internet ကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေသိပ်မကောင်းသလိုပဲ။ ပြီးတော့ detection level
နည်းနည်းမြင့်တဲ့အတွက်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် files တွေပါ Virus ဆိုပြီးဆွဲဆွဲထည့်တက်တယ်။
(၁) သူ့ free version ကတစ်ခြားဟာတွေထက် function တွေပိုပါတယ်။ sandbox mode ဆိုရင်
တော်တော်မိုက်တယ်။ ဘာ virus ၀င်၀င်သုံးပြီးရင် Deep Freeze လို restart ဖြစ်သွားရော။
(၂) Interface design မိုက်တယ်။ ခေတ်ဆန်ပေမယ့်မျက်စိမရှုပ်ဘူး။
(၃) သူလည်း virus သတ်တာတော်တော်ကောင်းတယ်။ အသေးရော၊ အကြီးရောအကုန်မိတယ်။
download.cnet မှာသူ့ကို rating 1 သတ်မှတ်ထားတယ်၊ တစ်ခြား rating site တွေလည်း
free version ဆို သူ့ကိုပဲ No.1 ပေးကြတယ်။ download site အတော်များများမှာလည်း
most downloaded antivirus list မှာအမြဲလိုလိုစာရင်း၀င်တယ်။
(၄) သူ့မှာပါတဲ့ silent/gaming mode ကလဲမိုက်တယ်။ on ထားရင် ဘာ notifications မှမပြ
တော့ဘူး။ game ဆော့တဲ့အခါတွေမှာ notifications တက်လို့ Desktop ထဲရောက်သွားတာမျိုး
(၅) virus scan စစ်တာနည်းနည်းကြာတယ်။ ပြီးတော့ free version ကစစချင်းမှာအလုပ်ရှုပ်တယ်။
သူ့ website မှာ register လုပ်ပြီးမှသုံးလို့ရတယ်။ offline ဆို website မှာ form ဖြည့်ပြီး key
တောင်း၊ အဲဒါကိုsoftware ထဲထည့်ပြီးမှသုံးလို့ရတယ်။
(၁) သူက install လုပ်ရတာဘာကောင်းသလဲမမေးနဲ့။ အမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး click တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့
(၂) Interface design ကအရမ်းကိုလှတယ်။ ပြီတော့သူ့ virus scan လုပ်တဲ့ speed ကတော်တော်လေး
(၃) ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်သူက user ကို notifications တွေသိပ်မပြဘူး၊ virus တွေ့ရင်လည်း
တော်ရုံတန်ရုံဆိုသူ့ဟာသူပဲဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ နည်းနည်း heavy တွေမှ user ကို request လုပ်တာ။
(၄) တစ်ခုရှိတာကသူက virus definition ၃၊ ၄ ရက်လောက်မလုပ်မိတာနဲ့ tray icon မှာ အနီရောင်ကြက်ခြေ
ခတ်ကြီးဖြစ်သွားရော။ ကြည့်ရတာမလှဘူးဗျာ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစိတ်ကောက်နေသလိုပဲ။
(၁) သူက antivirus မဟုတ်ပါဘူး။ anti-spyware program တစ်ခုပါ။ virus တွေ malicious program
တွေဘာဆိုဘာမှမရှင်းပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကို disable ပဲလုပ်ထားလိုက်တယ်။
အိုင်လဲပြောချင်ပါတယ် MSE offline ပါ။ အလကားရရုံတင်မဟုတ်။ မိမိကိုယ်ပိုင်သွားလေရာယူသွားလို့ရပါသကော။ ကိုယ်နဲ့မကွာ ယူသွားလို့ရတာအပြင် update ပါရသကော။ ဟီး။ နဲနဲတော့ hack တာဆိုးပါသကော...
ဟုတ်တယ်။ MSE လည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေ MSE ပဲသုံးဖြစ်တော့တယ်။
သူ့ Interface ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ။ settings တွေချိန်ရတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းလွယ်တယ်။
ကြည့်ရတာရော၊ သုံးရတာရောစိတ်ချမ်းသာတယ်။ ပြီးတော့ online update လုပ်ရတာလည်းမြန်တယ်။
Desktop protection မှာတော့စိတ်ချလက်ချယုံစားလို့ရပေမယ် internet protection တွေတော့လိုသေးတယ်။
ပြီးတော့ feature တွေလည်းသိပ်မပါဘူး။ Symantac ကတော့ MSE ဆိုတာခပ်ညံ့ညံ့ antivirus တစ်ခုပါပဲဆိုပြီးဝေဖန်ထားတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့မပြည့်စုံတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေပေမယ့်နောက်ပိုင်းတော့
တော်တော်လေးပြီးပြည့်စုံလာမယ့် new generation တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ အခုကတော့ MSE သုံးပြီးကတည်းကဘယ် antivirus ကိုမှရင်မခုန်တော့ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် ပြဿနာက တစ်ခုပဲရှိတာ။ MSE က Licensed Windows တွေအတွက်သာ ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Windows တွေက Pirate တွေဆိုတာ မိသွားရင်တော့ သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
Windows အတွက်ဆိုရင်တော့ Update လုပ်ပေးနိုင်ရင် MSE က အကောင်းဆုံးပဲ။ ^^
avira and kasper ပါ... avira ကို ပိုၾကိဳက်ပါတယ်
AVG ကြိုက်တယ်ဗျာ Offline update လည်းရတယ် key ဆိုရင်လည်း အခြား Antivirus တွေဆို Online နဲ့ချိတ်ပီး သေချာစစ်တော့ crack တွေနဲ့သုံးရတာ.....(bitdefender လို ESET လိုပေါ့) AVG က ရိုး2 Software တွေလိုပဲ key တခါထည့်ထား သုံးရော..key ကလည်းလိုင်းပေါ်မှာ လွယ်2နဲ့ရတယ် MSE က ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် task manager ခေါ်ပီး သတ်ကြည့် ရတယ် အခြား Antivirus တွေဆိုမရ၀ူး... Virus ပြင်းရင် သွားမယ်နဲ့တူတယ်ဂျ...
I'm using ESET NOD32 in windows system for several years, It is light, comfortable one.
In unix OS I don't use antivirus software. Just SpamAssasin for MTA .
In My Opinion, it's depends on environments, security policies to each individual.
As for me I cannot use Warez or pirated edition or free anti-virus software.
Bit Defender ပဲမိုက်တယ်...
သူက သုံးဖူးသမျှထဲမှာ Security အရမ်းကောင်းတယ်လို့ထင်မိတယ်.
ကျွန်တော်သုံးဖစ်တာလဲ ကွန်ပြူတာဝယ်တော့ License နဲ႔ပါတာမို့ အလကားရလို့လားမသိ
avast ကိုအၾကိုက်ဆုံးပဲ key ကလဲ2038 ထိသုံးလို႔ရတယ် တစ်ခုပဲအလုပ်နဲနဲရႈပ်တာ www.avast.com ကို mpt ကပိတ်ထားတော့ u1006 နဲ့ကျော်ၿပီး update လုပ်ရတယ် program version ကလဲ connection ရှိရင်auto ၿမှင့်ပေးတယ် အၾကိုက်ဆုံးကတော့ bootscan ပါတာကိုပိုၾကိုက်တယ် ram ကိုလဲ128 ပဲ တောင်းတယ် နောက်ထက်ကောင်းတာက computer ဘယ်နလုံးတင်တင် key မတိုက်ဘူး network scan ကလဲတော်တော်မိုက်တယ် update ကိုoffline လုပ်ချင်ရင် လဲအလုပ်မရႈပ်ဘူး double clip နိုပ်လိုက်တာနဲ့ update ၿဖစ်ၿပီ I like avast
AVG 2013 အဲဒီကောင်းလည်းခုထိ Free ဘဲ မိုက်တယ် Update လည်းအဆင်ပေျတယ်။ Virus မိလည်းမိတယ်
Network security မပါတာတစ်ခုဘဲ
Wrong တာရိႈရင် ၿပန် share ပါ ဦး Thank you al
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာ Anti-Virus မှ မသုံးပါဘူး Windows မှာပါလာတဲ့ Windows Defender ပဲသုံးတယ် Update လုပ်ရင်လည်း ခဏပဲ Windwos Defender က ကောင်းလို့လားမသိဘူး Virus လည်း မကိုက်ဘူး Virus တွေ့ရင်လည်း သူ့ဘာသာသူ ရှင်းတယ်လေ ကျွန်တော်ကတော့ Windows Defender ပဲ Update လုပ်ြပီး သုံးနေတယ်
Windows 10 မှာဆို ရင်တော့ Anti-virus software မသုံးတာ ပိုကောင်းမယ်။ Anti-virus ကြောင့် Attack surface များလာပြီး ပိုဆိုးတပ်တယ်။